Showing ९१-१०० of ३९४ items.
सलमानले “नेपाल दबंग टुर” बाट लादैछन् ५ करोड
फागुन २६ मा नेपालको काठमाडौंको टुँडिखेलमा हुन लागिरहेको सलमान खानको दबंग टुरले सर्बत्र चर्चा बटुलिरहेको छ । सलमान फागुन २५ गते नेपाल आउँदैछन् । उनीसहित १ सय १० जनाको जम्बो टोलीसहित नेपाल आउँने तय भएको छ । कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजक ओडिसी इन्टरटेन्मेण्टले जनाएको छ । सलमानले स्टेजमा एक घण्टा प्रस्तुती दिने तय भएको छ । सलमानसंगै सोनाक्षी सिन्हा, कृति सेनन, डेजी शाह, प्रभु देवा, मिट ब्रदर्स, मनिष पल समेत नेपाल आउँने भएका छन् । कार्यक्रम गरेबापत सलमानले नेपालबाट ५ करोड लिएर जाने भएका छन् । शोको सम्पुर्ण खर्च १३ करोडको आसपासमा हुने आयोजकले अनुमान गरेको छ । बलिउड हस्तीसं
श्रीदेवीको अन्तिम ३० मिनेटको कहानी
बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवी अब हामीमाझ रहिनन् । उनको निधनको खबरले यतिबेला भारत स्तब्ध भएको छ । जो-कोहीँ उनको एक झलक हेर्नका लागि व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । श्रीदेवीको निधन दुबईमा भएको थियो । यस्तैमा उनको निधनलाई लिएर निकै ठूलो खुलासा भएको छ । यूएईको पत्रिका 'खलीज टाइम्स' ले श्रीदेवीको अन्तिम ३० मिनेटकोे कहानी छापेको छ । पत्रिकाले लेखेको छ, 'निधनभन्दा अगाडि श्रीदेवी पति बोनी कपूरसँग डिनरका लागि जान तयारी गर्दै थिइन् ।' यो रिपोर्टमा पत्रिकाले दाबी गरेको छ कि श्रीदेवीलाई बाथटबमा लडेको अवस्थामा भेटिएको थियो । पत्रिकाले अगाडि लेखेको छ, ‘शनिवार राती बोनी कपूर मुम्बईबाट फर्किएर जुमेरा एमिरेट्स ट
अजुर्नले भनेका थिए “श्रीदेवी मेरी आमा होईनन् बुवाको पत्नी हुन्”
हिजो राती बलिउडकी सदाबहार नायिका श्रीदेवीको निधन भएपछि उनका प्रशंसकहरुमा ठुलो चोट पुगेको छ । दुबईमा आफनो भान्जाको बिवाहका लागि पुगेकी श्रीदेवीलाई अचानक हृदयघात हुँदा उनको निधन भएको हो । बलिउडमा ८० र ९० को दशकमा बलिउडमा एकछत्र राज गरेकी उनको पियरको रुपमा भने अनलि कपुर र जितेन्द«संग निकै रुचाईएको थियो । श्रीदेवीको करियरको समय उनको नाम मिथुनसंग पनि जोडिएको थियो । उनले एक्कासी आफनै फिल्मका निर्माता बोनी कपुरसंग बिवाह गरेपछि सबै जना छक्क परेका थिए । अनिल कपुरका आफनै दाई रहेका बोनीले जेठी श्रीमती मोनालाई सन् १९९६मा डिभोर्स लिएर श्रीदेवीलाई दोस्रो श्रीमतीकोरुपमा भित्राएका थिए । बोनीको जेठ
भारतको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ तथा पौराणिक कथा ‘रामायण’ मा आधारित भएर व्यवसायिक फिल्म निर्माण हुने भएको छ । यो फिल्म निर्माण गर्नका लागि निर्माताले यूपी सरकारसँग मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टैन्डिङ पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो फिल्म '3डी' मा बनाइने छ । फिल्मलाई अल्लू अरविन्द, नामित मल्होत्रा र मधु मन्तेनाले निर्माण गर्नेछन् । खबरका अनुसार, यो फिल्म ३ सिरिज र तीन अलग-अलग भाषा (तमिल, तेलुगु र हिन्दी) मा बनाइने छ । फिल्मका निर्माता मधु मन्तेनाले भने, '५ सय करोडमा फिल्म निर्माण हुनेछ । भारतको सबैभन्दा महंगो फिल्म बनाउने हाम्रो सोच हो । नयाँ टेक्नोललोजी र भिएफएक्ससँगै हामी यो पौराणिक कथाल
बलिउड अभिनेता टाइगर श्राफ र अभिनेत्री दिशा पटानी स्टारर फिल्म ‘बागी २’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा टाइगर जर्बजस्त एक्सन अवतारमा देखिएका छन् । रोनीको भूमिकामा उनको लुक निकै धमाकेदार छ । यो फिल्ममा मनोज वाजपेसी, दीपक डोबरियाल र रणदीप हुड्डा जस्ता स्टार पनि देखिँदैछन् । ट्रेलर रिलिजभन्दा केही घण्टा अगाडि निर्माण टीमले फिल्मको दुई नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा टाइगर र दिशा फिचर्ड छन् । ‘बागी २’ का निर्माताले फिल्मको ट्रेलर मुम्बईको रेसकोर्समा निकै अनौैठो अन्दाजमा सार्वजनिक गरे । रेसकोर्समा टाइगर श्राफ र दिशा पटानीले हेलीकप्टरबाट झरेर फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरेका
मुम्बई/ एक समयमा ‘सिरियल किसरका’ नाम कमाएका नायक हुन इमरान हासमी । उनी अभिनित फिल्म चुम्बन बिना सफल नै हुदैन्थ्यो । तर उनी अहिले नराम्रा दिनहरुबाट गुज्रिरहेका छन् । आफनो पहिचान बनाउने चक्करमा उनले ती दर्शकहरुलाई पनि गुमाइसके जो इमरानको फिल्म केवल चुम्बन दृश्यको लागि मात्र भनेर भए पनि हेर्न आउँथे । अहिले उनको खासै राम्रा फिल्महरु प्रर्दशनमा आएका छैनन् । उनीमाथी दाउ लगाउने निर्माताहरु पनि एकदमै कम छन् । यती मात्र नभएर उनका आफनै नातेदार महेश भट्ट र मुकेश भट्टले पनि उनलाई लिएर कुनै फिल्म बनाएका छैनन् । अन्त : अब उनी आफै निर्माता बनेर फिल्म बनाउँदैछन् । उनीसँगै टी–सिरिज र एउटा कम्पनी मिल्ने प
अमिताभ बच्चन जागिरको खोजिमा ?
नामः अभिताभ बच्चन जन्ममितिः ११/१०/१९४२ उमेरः ७६ वर्ष ४९ वर्षदेखि फिल्मका काम गरेको अनुभव, करिव २०० फिल्मका काम गरेको भाषाः हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी र बंगाली कदः ६ फुट दुई इन्च, कदले कुनै पनि समस्या हुँदैन। अभिनेता अमिताभ बच्चनले आफ्यो यो बायोडाटा ट्विटर र इंस्टाग्राममा पोस्ट गरेका छन्, र शीर्षकमा लेखिएको छ, जब एप्लीकेशन। त्यसो हो भने अमिताभ बच्चन जागिरको खोजिमा छन्? अमिताभ बच्चनले आफ्नो पोस्टसँगै एक अग्रेजी पत्रिकाको एउटा समाचार पनि पोस्ट गरेका छन्। जसमा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र कैटरिना कैफको उचाइ अभिनेता शाहिद कपुर र अमिर खानको भन्दा अग्लो भएको उल्लेख छ। जसका
बलिउडका चर्चित निर्माता तथा निर्देशक सञ्जय लीला भंसाली ‘पद्मावत’ को सफलतापछि अझै तीन फिल्म फेरि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र अभिनेता रणवीर सिंहसँग गर्न चाहन्छन् । उनी चाँडै यी दुईसँग एकसाथ तीन फिल्मको 'डिल' गर्ने तयारीमा छन् । यसअघि नै भंसालीले यो कपलसँग तीन फिल्म गरिसकेका छन् । एशियन एजका अनुसार, सञ्जय लीला भंसालीलाई लाग्छ कि दीपिका र रणवीरमा अहिले निकै ट्यालेन्ट छ, जसको एक्सप्लोर गर्नु पर्छ । यसैकारण उनी यी दुई स्टारसँग एकसाथ ३ फिल्मको एक 'डिल' साइन गर्न चाहन्छन् । भंसालीले एएनआईसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘दीपिका निकै हार्डवर्किङ छिन् । उनी गाह्रो भन्दा गाह्रो भूमिका पनि सहजै
फिल्मस्टारबाट नेता बन्न लागेका कमल हासनले तमिलनाडुका जनताका लागि राजनीतिमा जाने फैसला लिएका छन् । अब उनले नयाँ कुनै पनि फिल्म नगर्ने भएका छन् । कमल हासन आफ्नो पार्टी र यसको सिद्धान्त यसै महिना घोषणा गर्दैछन् । बोस्टनमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा एक एक निजी समाचार च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा हासनले भने, 'दुई फिल्मभन्दा बाहेक मसँग अरु फिल्म छैन । मलाई इमान्दारीपूर्वक जीविकापार्जन गर्नका लागि केही गर्नु पर्छ । तर, मलाई लाग्दैन कि म हार्न जाँदैछु ।' उनले अगाडि भने,' म एक राजनीतिज्ञ हुन सक्दिनँ तर गएको ३७ वर्षदेखि म समाजसेवामा छु । यो ३७ वर्षमा हामीले १० लाख निष्ठावान कार्यकर्ता जुटाएका
‘परी’ ट्रेलरमा अनुष्काको डरलाग्दो रुप
अभिनेत्री अनुष्का शर्माको नयाँ फिल्म ‘परी’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । फिल्मको नाम ‘परी’ भएपनि अनुष्काको डरलाग्दो रुपले सबैको होस उडाउन सक्छ । यो फिल्म २ मार्चमा रिलिज हुँदैछ । दर्शकका लागि यो फिल्म यसकारण पनि खास छ कि विवाहपछि अनुष्काको यो पहिलो फिल्म हो । ‘परी’ लाई प्रोसित रोयले निर्देशन गरेका हुन् । अनुष्कासँगै परमब्रता चटर्जी, रजत कपूर र रीता बिहारी चक्रवर्तीको पनि फिल्ममा प्रमुख भूमिका छ । यो फिल्मलाई अनुष्का आफैंले निर्माण गरेकी हुन् । उनको प्रोडक्शन कम्पनी क्लीन स्लेट प्रोडक्शनको यो तेस्रो फिल्म हो । यसभन्दा अगाडि फिल्म 'एनएच १०' र 'फिल्लौरी' निर्माण गरिसकेको छ । फिल्म